Mohamed Salah, Philippe Coutinho iyo Bobby Duncan oo ugu waa weyn maanta wararka suuqa kala iibsiga ee kooxda Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 21 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaan xagaagan suuqa si wanaagsan kaga dukaamaysan, waxaana ay eegi doonaan inay xiddigo ku soo daraan safkooda marka suuqa kala iibsiga dib loo furo kaddib markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay hal dhibic looga qaaday horyaalka Premier League.
Reds waxa ay indhaha ku haysaa inay 30 sano kaddib xilli ciyaareedkan 2019-20 hanato horyaalka Ingiriiska, iyadoo dareensan inay qaadista Premier League kaga filan yihiin xiddigaha ay haatan haysato.
Macallin Jurgen Klopp ayaa la filayaa in sidoo kale uusan garoonka Anfield suuqa xagaagan ka dirin xiddigihiisa oo uu ku faro adaygo.
Haddaba warbixinnadii dhanka suuqa kala iisbiga xiddigaha ee kooxda Liverpool kuwaasoo ugu weynaa maanta oo Arbaco ah waxaa soo bandhigtay shabakadda Sports Mole.
Mohamed Salah oo ku faraxsan kooxda Liverpool:-
>- Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa soo jeediyey inuu eegayo inuu waqti dheer mustaqbalka sii joogo Reds, taasoo ka dhigan inuu aad ugu faraxsan yahay garoonka Anfield.
Nordsjaelland oo eegeysa inay la wareego da’yarka kooxda Liverpool ee Bobby Duncan:-
>- Kooxda reer Danish ee Nordsjaelland ayaa la soo warinayaa inay xaqiijinayso heshiiska amaahda ah ee ay kula wareegeyso da’yarka naadiga Liverpool ee Bobby Duncan.
Kooxda Liverpool oo aan waligeed dib ugu soo laaban doonin xiisaha Philippe Coutinho:-
>- Liverpool ayaa la rumeysan yahay inaysan waligeed dib ugu soo laaban doonin la soo wareegista laacibkoodii hore khadka dhexe ee Philippe Coutinho, isla markaana aysan rabin inay xagagaan dib uga soo ceshato kooxda Barcelona.. Guji halkaan si aad u aqrisato warbixintaan oo dhammaystiran.
RASMI: Frank Ribery oo ku biiray Kooxda Fiorentina ee dalka Talyaaniga